भारतमा एकैदिन झण्डै ७० हजार संक्रमित थपिए,९७७ जनाको मृ’त्यु – Khabar PatrikaNp
August 20, 2020 161
नयाँ दिल्ली, ४ भदौ – भारतमा कोरोनाभाइरसबाट दैनिक सङ्क्रमितको संख्या ७० हजारसम्म पुग्न लागेको छ । सरकारी अधिकारीहरुले बिहीबार दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा ६९ हजार ६५२ जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् ।
तीमध्ये छ लाख ८६ हजार ३९५ जना अझै पनि सङ्क्रमित अवस्थामै रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।त्यसैगरी भारतमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरुको संख्या ५३ हजार ८६६ पुगेको छ । तीमध्ये ९७७ जनाको पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएको हो ।
भारतमा कुल सङ्क्रमितमध्ये २० लाख ९६ हजार ६६५ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । यो संख्या सन्तोषजनक रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । प्रदेश अनुसार हेर्दा भारतमा सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्र राज्य प्रभावित भएको छ । त्यसपछि तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली लगायतका प्रदेशहरु बढी प्रभावित भएका छन् । (रासस-एएनआई)
Prevवा ज्योतिषी हरिहर अधिकारीले धो’का दिएको भन्दै युबतिको यस्तो स्टाटस, ‘६ वर्षको माया ६ मिनेटमा चैट’
Next क्वारेन्टिनमै थप १७ महानगरीय ट्राफिक प्रहरीमा कोरोना संक्रमण
यूरिन इंफेक्सनबाट पिडित हुनुहुन्छ..? यसो गर्नुहोस आराम मिल्नेछ !
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33326)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (27293)